Gargaar News | War & wacaal daray ah
Odayaasha iyo Cuqaasha beesha Sacad Gaar ahaan Beesha Odow oo shaaciyay in uu fashilmey shirkoodii ay kusoo gudbin lahaayeen Ergada Jufo walba u matalaysa Doorashada Xildhibaanada Somalia.
Odayaasha iyo Cuqaasha beesha Sacad Gaar ahaan Beesha Odow ayaa sheegay in uu fashilmey shir maalmahan Galkacyo uga socdey wax garadka Beesha oo la doonayey in ay beeshu ku...
Cabdi Qaybdiid muxuu ka fa’iidaa colaadda iyo hanjabada Puntland iyo xusuusin dhibatoyinkii uu shalay gaystay.
Puntland maxaa xiga iscasilaada Soocade?.
Alle how naxariisto abwaan-kii weynaa ee Soomaaliyeed abwaan huryo oo ahaa mu’alufkii ruwaayado badan oo lagu dhigay dalka Somaliya ayaa laga hayaa oraahda ah labo-labo ayaa loo soo hoobanaayaa...
Puntland maxaa ku xiga iscasilaada soocade?.
Isbedelka Jadwalka Doorashada sanadka 2016-ka oo la shaaciyey.
MAXAA LAGA DHAXLAY BUR-BURKII SOOMAALIYA?
Bur-burkii qaranka soomaaliya waxaa uu saameyn weyn u geystay malaayiin ka mid ah shabacka soomaaliyeed. Muwaadiniin soomaaaliyeed ayaa waxay magangelyo doon ku tageen wadamada deriska la ah soomaaliya sida...
Madaxweynaha puntland oo maanta dhagax dhigay dhisme cusub..
Ciidamo qabsaday bankiga dhexe ee garowe.
Gudoomiyaha gobalka nugaal oo baaq u jeediyay shacabka puntland.
Daawo maxkamad ku taal dalka Hindiya oo dil ku xukuntay 50 dhalinyaro Soomaali ah.
maxkamad-ku-taal-hindiya-oo-dil-ku-xukuntay-50-qof-oo-soomaali-ah	Warar	Faalo: Ma Qurux badana dib u dhac ku yimaada jadwalka doorashada!
Dib u dhaca ku yimid Jadwalka Doorashada Soomaaliya waa arin Hore loo saadaaliyey taas oo wal wal ka...	Maqaalo	Musharax Cali Xaaji Warsame oo Garowe lagu soo dhaweeyey.
Cali Xaaji Warsme oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka Madaxtinimada Soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo...	Warar	Iska horimaad ka dhacay magaalada Jowhar.
Shaqaaqo gacan ka hadal ah oo khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa habeenkii xalay ee Jimacada ah ka dhacay...	Warar	Gaalkacayo iska horimaad dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyo beeleed.
Hal qof ayaa ku dhintay iska-horimaad dhexmaray ciidamo ka tirsan Puntland oo marka gawaari ay leedahay Galmudug oo muddo...	Warar	Somalia faults Kenya’s argument on ocean row.
Somalia faults Kenya’s argument on ocean row Somalia says an agreement it signed with Kenya in 2009 was not...	News in English	Tababare Zidane Oo Ku Dhawaaqay Kooxdiisa Uu Kala Hortagayo Las Palmas: Modric & Keylor Navas Oo Soo Laabtay, Marcelo & Casemiro Oo Ka Maqan.
Markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan goolhaye Keylor Navas ayaa ka mid ah kooxda Real Madrid ee sabtida iyadoo goolhayaha...	Sports	Yaa Leh Eeda Burburkii Qarankeenii?
Maqaalo	Madaxweynaha puntland oo ugu Baaqay odayaasha dhaqanka in ay soo xulaan xubno metelikara shacabka.
Madaxweynaha Soomaaliya,Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay markii ugu horreysay dalka inuu ka dhaco kacdoon lugu waayo dowlad-nimadda.	Warar	‹ Prev